Dreame L10 Pro: falanqaynta, qiimaha iyo sifooyinka | Warka Gadget
Dreame L10 Pro: dib u eegista, qiimaha iyo sifooyinka
Miguel Hernández | | qalabka
Waxaan la soo laabanaa alaab Dreame ah oo u go'an in lagu nadiifiyo guriga, mid ka mid ah kuwa casriga ah ee beryahan dambe. Waxaan dhawaan halkan ku haysanay Dreame T20, nadiifiye vacuum gacanta ah oo leh wax qabad heer sare ah taasina waxay naga tagtay dareen aad u wanaagsan.
Markaa hadda waxaanu ku sii wadnaa alaabtan cusub, Robot vacuum cleaner Dreame L10 Pro, badeeco wareegsan oo cadaalad ah oo naga caawin karta nadiifinta gurigeena. Nala joog oo ogow sida Dreame L10 Pro u yimaado si uu si toos ah ula tartamo alaabada ugu qaalisan suuqa iyo inay runtii u qalanto iyo in kale.
1 Tilmaamaha farsamada Dreame L10 Pro
2 Madax-bannaanida iyo isticmaalka maalinlaha ah
3 Faakium wanaagsan, xoqin "wanaagsan".
Tilmaamaha farsamada Dreame L10 Pro
Dreame L10 Pro wuxuu leeyahay awoodda ugu badan 4.000 Pa nuugista, kaas oo ku dhex jira celceliska waxa noocyadan alaabooyinku ay ku bixiyaan inta u dhaxaysa aaladaha nadiifiyaha robot-ka oo qiimahoodu siman yahay iyo xitaa ka sareeya. Dhankeeda, waxay awood ku leedahay 570 ml oo biyo ah, halka kaydka dareeraha loogu talagalay xoqiddu waxay joogtaa 270 ml. Waxaas oo dhan waxaa weheliya shasis madow oo caag ah oo aad caadi u ah, oo dareemeheedu ku yaal xagga sare.
Waxyaabaha ku jira sanduuqa waa sida soo socota:
Qalab ujeedo badan leh
Dhinaca iyo burushka dhexe
Ma hayno, dabcan, nooc kasta oo ka mid ah alaabta "dheeraad ah" ee loogu talagalay dayactirka ama beddelka qaybaha, marka ay sii xumaanayaan waxaan tagi doonaa barta caadiga ah ee iibka, qiimaha xilligan la joogo ma ogid. Waxa aan caddaynay waa in ay tahay badeecad leh cabbirro 350 x 350 96 millimitir oo bixisa wadarta miisaanka 3,7 Kg, Taasi maaha wax yar, laakiin sidoo kale waxay ku dhex jirtaa qiyaasta caadiga ah ee qalabkan.
Madax-bannaanida iyo isticmaalka maalinlaha ah
Isticmaalka maalinlaha ah ee robotkani wuxuu bixiyaa sawaxanka ugu badnaan kaas oo noqon doona ilaa 60 db Waqtigeeda ugu xasaasisan ee nuugista, gudaha qaababka kala duwan ee ay bixiso qaybta gaarka ah ee codsiga Mi Home, kaas oo, sida aad ogtahay, waa kan maamusha deegaanka ku xiran Xiaomi iyo alaabteeda, isagoo la jaan qaadaya labadaba. Android sida la socota macruufka guud ahaan
Ku saabsan madax-bannaanida, Waxaan ku raaxaysanay ku dhawaad ​​5.000 mAh ay ku dhawaaqday sumadda, tani waxay nagu soo kordhin doontaa nadiifinta agagaarka 150 daqiiqo ama ilaa 200 mitir, Xaqiiqda ah in aynaan awoodin in aan xaqiijino sababtoo ah ma haysanno guri sidaas u weyn (rajo), laakiin waxay ku timaadaa qiyaastii 35% dhamaadka nadiifinta. Nadiifin si cadaalad ah loo faahfaahiyay, oo aan dhaafsiisnayn waqtiyadii hore oo la kulma waxqabadka laga filan karo falanqaynta noocan ah ee deegaanka ayaa mahad leh khariidaynta deegaanka ee 3D (iyada oo loo marayo LiDAR) oo lagu sameeyay kabka dareemayaasha. Baaska hore, sida aad la socotaan, waxa uu noqon doonaa mid gaabis ah, halka hadda laga bilaabo uu ka faa'iidaysan doono booska iyo waqtiga, taas oo ay ugu wacan tahay macluumaadka la bartay.
Faakium wanaagsan, xoqin "wanaagsan".
Sida had iyo jeer, iyada oo aan loo eegin inta teknoolajiyada ay ku jiraan, xoqintu waxay ka badan tahay xaaqin qoyan oo qabata shaqadeeda, laakiin kama saari doonto calaamadaha wasakhda ah ee ugu habboon. Waxaan leenahay isticmaalka muhiimka ah ee deegaanka. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan waxaan ku haynaa bedel wanaagsan tan Dreame L10 Pro, astaan, dhanka kale, waa calaamad ay ugu wacan tahay xiriirka dhow ee ka dhexeeya tayada iyo qiimaha.
Waxaan haynaa, sidee bay noqon kartaa haddii kale, la mid ah Amazon Alexa iyo kaaliyaha Google, Markaa maalinba maalinta ka dambaysa way fududaan doontaa haddii aan si fudud u waydiino kaaliyahayaga farsamada gacanta ee shaqada ku jira. Badeeco lagu taliyay, kaas oo nagu qanciyay isticmaalka guud iyo in aad awoodid halkan ka iibso oo leh dammaanadda Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Dreame L10 Pro: dib u eegista, qiimaha iyo sifooyinka